Isitolo esidayisa yonke impahla Polycarboxylate Ether Monomer HPEG / TPEG ifektri abakhiqizi | UGaoqiang
I-Polycarboxylate ether ephezulu yokunciphisa amanzi yi-superplasticizer yesizukulwane sesithathu esekwe ku-calcium lignosulphonate ne-naphthalene sulfonate. I-SUNBO PC-1030 iyi-powder ogeleza mahhala, owomileyo othuthukiswa ngubuchwepheshe obukhethekile bokufafaza ubuchwepheshe obomile.
Igama: isopentenyl polyoxyethylene ether
Ifomula engezansi: CH = C (CH) CHCHO (CHCHO) nH
Isigaba: i-nonionic surfactant
Igama: methallyl polyoxyethylene ether
Ifomula Yamamolekhula: CH = C (CH) C H O (CHCHO) nH
Thayipha: I-Nonionic surfactant
Izinkomba zomzimba nezamakhemikhali
PH (5% isixazululo samanzi)
Inani le-Hydroxyl, mgKOH / g
Okuqukethwe kwe-PEG (%)
Izinga lokugcina amabhondi kabili (%)
1. Lo mkhiqizo awunabuthi, awucasuli, unomswakama omuhle wamanzi, uyancibilika emanzini kanye nama-solvent ahlukahlukene, futhi uyinto ebalulekile eluhlaza esizukulwaneni esisha semishini yeglue esebenza kahle kakhulu.
2. Ukusatshalaliswa kwesisindo samakhemikhali kwalo mkhiqizo kuncane, okuqukethwe kwe-polyethylene glycol kuphansi, izinga lokugcinwa kwama-bond amabili liphakeme, futhi nomsebenzi we-polymerization uthuthuke kakhulu. Izinga lokuguqulwa komkhiqizo liphezulu. Ukusebenza okuphelele komenzeli kuhle kakhulu. \_
3. I-ejenti yokwehlisa amanzi eyenziwe ngumkhiqizo inekhono eliphezulu lokuhlakazeka kwezinhlayiyana nokugcina amandla, futhi inomphumela omuhle wokusabalalisa ezintweni eziningi ze-powder ezifana nosimende. Inezinga eliphezulu lokunciphisa amanzi nokusetshenziswa kasimende okuphansi. Ikhwalithi kasimende ifakiwe ngu-0.2% -0.5% Isinciphisi samanzi esiphathekayo, isilinganiso sokunciphisa amanzi singafinyelela ngaphezu kuka-30%.
4. Ngemuva kokufaka i-ejenti yokwehlisa amanzi kukhonkolo, kwakheka ifilimu ekhangisa phezu kwezinhlayiya zikasimende, ezibambezela izinga likasimende, okwenza ukukhula kwetshe lesamente likristale kuphelele ngokwengeziwe, kunciphise ukuvaleka kwamanzi kwe-capillary ukuhwamuka, futhi isakhiwo senethiwekhi siminyene kakhulu, esingathuthukisa ukhonkolo Amandla amakhulu angaphezu kuka-20%. Ingasetshenziswa kukhonkolo wokuhweba onamandla amakhulu (ngaphezulu kwe-C60).
5. I-ejenti yokwehlisa amanzi eyenziwe ngumkhiqizo ingayithuthukisa kakhulu i-rheology kanye ne-plasticity kakhonkolo. Ingafinyelela ukwakhiwa kokhonkolo ngokuzimela, ukumpompa, nangaphandle kokudlidliza, okungakhuphula isivinini sokwakha futhi kwehlise izindleko zokwakha.
6. Lo mkhiqizo umkhiqizo oluhlaza futhi onobungani bemvelo, okuqukethwe i-chloride ion: ≤0.1%. Thobela izindinganiso zokuphathwa kokuvikelwa kwemvelo kwe-ISO14001.
1. Lo mkhiqizo unokuncibilika kwamanzi okuhle.
2. Lo mkhiqizo usebenzisa i-catalyst esebenzayo kakhulu nenqubo ekhethekile yokuhlanganisa. Ukusatshalaliswa kwesisindo samangqamuzana kuncane, okuqukethwe kwe-ethylene glycol kuphansi, futhi nezinga lokugcina izibopho eziphindwe kabili liphezulu. Umsebenzi we-polymerization uthuthuke kakhulu, izinga lokuguqulwa komkhiqizo liphezulu, umkhiqizo wokunciphisa amanzi we-polycarboxylic acid owenziwe ngumkhiqizo unokuqukethwe okuphezulu okuphezulu, futhi isinciphisi samanzi sinokusebenza okuhle kakhulu okuphelele.
3. Inkomba yokusebenza nekhwalithi ye-synthetic water reducer:
1) Ukusebenza kwezindleko eziphezulu. Endabeni yokuthola isilinganiso esifanayo sokunciphisa amanzi, inokusebenza kwezindleko eziphezulu.
2) Ukuxubana okuphansi nezinga eliphezulu lokunciphisa amanzi. Isiphuzo sikamama esinciphisa amanzi esinokuqukethwe okuqinile okungu-20% kanye nesilinganiso sokunciphisa amanzi esingu-1.0% (inani lezinto zokuqinisa) singafinyelela ku-30-35%.
3) Ukugcinwa okuhle kwepulasitiki. Ukulahleka kokhonkolo ngemuva kwe-1h kuncane.
4) ukuqina okuhle kakhulu. Inganciphisa kakhulu ukusetshenziswa kwamanzi futhi ithuthukise ukuqina kokhonkolo.
5) Ukuvikelwa okuluhlaza kanye nokwezemvelo. Enqubeni yokukhiqiza yokwehlisa amanzi, akusetshenziswa i-formaldehyde ne-chloride ion eyingozi emvelweni, futhi okuqukethwe yi-sulfate kuphansi.
ucezu oluqinile ngu-25KG / isikhwama;
I-60% yomenzeli wokuqukethwe: 1000 kg / isigubhu, amanzi amaningi, isikhwama samanzi esitsha
Lo mkhiqizo awunabuthi, awunaphunga, awunakokhela, isitoreji samakhemikhali jikelele nokuhamba. Gcina endaweni yokugcina impahla epholile, eyomile nomoya.
unyaka owodwa (isitoreji esivaliwe ekamelweni lokushisa)
Langaphambilini I-Sodium Gluconate
Olandelayo: I-JS -103 Polycarboxylate superplasticizer 50% (uhlobo lokunciphisa amanzi aphezulu)